Araka ny fitantaran’ireo nanatri-maso, noho ny tsy fetezana ara-teknika teo Ankeniheny no nahatonga ny loza. Rehefa avy nokirakiraina ka novelomina, natao an’irony ‘contre-attaque » irony anefa ilay fiara 4x4 dia tsy tana fa nifatratra avy hatrany tany anaty rano. Difotra sy nilentika mihitsy ilay 4x4 tao anatin`ny ranon`Ikopa. Nila ny fokonolona nanao tana-maro vao nahafaka azy tao, efa ho tamin’ny 11ora sy sasany antoandro. Tsy nisy ny aina nafoy. Mila mitandrina ihany satria mila arovana ny aina.